TC TG HDL-C LDL-C - Ropa Lipid Rinokurumidza Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
TC TG HDL-C LDL-C - Ropa Lipid Rinokurumidza Reagent Kit
[email inodzivirirwa] Ropa Lipid Reagent Kit (TC / TG ​​/ HDL-C / LDL-C) inoitirwa kuyera huwandu hwemhando ina dzeropa lipid (yakazara cholesterol TC, triglyceride TG, yakakwira-density lipoprotein cholesterol HDL-C, yakaderera-density lipoprotein cholesterol LDL-C) muvanhu serum. Kiriniki, inonyanya kushandiswa semubatsiro mukuongororwa kwehypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, coronary mwoyo chirwere uye atherosclerosis.
Yakazara cholesterol (TC) yakakosha kiriniki biochemical chiratidzo. Yakakwira nhanho TC inogona kutungamira kune atherosclerosis, cerebral thrombosis, chirwere cheshuga, coronary moyo chirwere, hosha dzechiropa uye biliary system, nezvimwe.
Triglyceride (TG) haisi chete yakaenzana neTC, mwero wemafuta emuviri uye glucose yeropa, asiwo yakanyatsoenderana nekufutisa. Chikamu chepamusoro TG chinogona kutungamira ku hyperlipidemia. Kukwidziridzwa kweTG kunoenderana nezvirwere zvakaita seatherosclerosis. Nekudaro, kuwanikwa kweTG kwakakosha kwazvo mukudzivirira uye kuongororwa kwechirwere cheshuga, nephropathy, bile dziviriro yekuvharira uye zvimwe zvinokanganisa endocrine zvine chekuita neepid metabolism.
High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) inobatsira kugadzirisa maitiro ekudzoreredza cholesterol kutakura, anti-oxide, antithrombotic, anti-inflammatory, uye inokanganisa vascular endothelial function, izvo zvese zvinobatsira mukudzivirira kwecoronary chirwere chemoyo. Sechiratidzo chakakosha chekutarisa ropa lipid level, HDL-C ine chirevo chakanyanya mukusarudzwa kwezvinodhaka uye fungidziro yekufungidzira kwecoronary chirwere chemoyo chirwere uye atherosclerosis therapy.
Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) inozivikanwawo seatherogenic factor. LDL-C inoratidza yakaderera-density density lipoprotein cholesterol mwero, iyo yakakwira reshiyo iri pamusoro peTC, iyo yakanyanya njodzi ndeye kuwana atherosclerosis. Kunyatsoonekwa kweLDL-C kwakakosha mukutanga-nhanho kudzivirira, kuongororwa, kurapwa uye kucherechedzwa kwekurapa mhedzisiro yechirwere chemoyo checoronary. LDL-C ndiyo musimboti wekutungamira mashandisiro emishonga yevarwere vehypercholesterolemia
NKM: 0.3 ~ 11.3 mmol / L